Publié août 20, 2019 par Book News
Hanatsara ny fomba fiasany ny Polisim-pirenena ao anatin’izao enim-bolana farany izao. Hisy araka izany ny paikady vaovao hapetraka hanatratrarana ny tanjona. Anisan’izany ny ady amin’ny kolikoly.
Hamafisina ny ady amin’ny kolikoly
Nisy ny atrikasa notanterahin’ny Ministeran’ny Filaminanam-bahoaka teny amin’ny CCI Ivato ny, omaly sy androany. cc: Toria Dimbiniaina
Nanatanteraka atrikasa teny amin’ny CCI Ivato ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka omaly. Mifarana androany io atrikasa io ary votoatin’ity atrikasa ity ny fanatsarana ny fomba fiasan’ny Polisim-pirenena hiadiana amin’ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin’ny enim-bolana faharoa amin’ity taona ity. Ho hita taratra amin’ity paikady ity ny fanamafisana ny ady amin’ny kolikoly.
Notsindrin’ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka,­ ny Contrôleur Général de Police, Rafanomezantsoa Roger, fa sady manimba ny Polisim-pirenena no manimba ny Firenena ny kolikoly. Noho izany dia atao vaindohan-draharaha ny ady amin’ny kolikoly.
« Tsy ho leferina mihitsy ny kolikoly. Tsy misy hindrafo amin’ny fampiharana ny sazy. Hisy ny ady amin’ny fanamparam-pahefana,­ fanamparan-kery tsy ara-dalàna sy ny tsy ara-drariny ataon’ireo Polisim-pirenena », hoy izy.
Mitaky vokatra maika ny vahoaka raha eo amin’ny lafiny fandriampahalemana.­ Tsy tokony handefitra noho izany ny ady amin’ny kolikoly.
Famerenana ny hasin’ny Polisim-pirenena
Tanjon’ny Polisim-pirenena amin’ity enim-bolana faharoa ity ihany koa ny famerenana ny hasin’izy ireo, amin’ny maha-mpitandro filaminana azy.
Nilaza ny Praiminisitra Ntsay Christian nandritra ny fanokafana ity atrikasa ity fa « mila averina amin’ny laoniny ny hasin’ny Polisim-pirenena. Mila famendrehana sy fanajana lalàna izany ary mila atokisan’ny vahoaka ».
Ankoatra izay dia nanamafy hatrany ny Praiminisitra fa hojerena akaiky ny fanapariahana ireo Polisy manerana ny Nosy ary hojerena ihany koa ny hanomezana ny fisondrotan’ny mariboninahitra eo anivon’ny Polisim-pirenena ka ireo izay tokony mendrika ny hahazo izany no tolorana azy.
Tafiditra anatin’ny paikady vaovaon’ny Polisim-pirenena ihany koa moa ny ady amin’ny herisetra, ny ady amin’ny asan-jiolahy sy ny fanarahana ny fitsipika anatiny.